Rant: Iyo Pamhepo Piracy Musika | Martech Zone
Indasitiri yemimhanzi uye piracy, iyo indasitiri yemamuvhi uye nzizi, mapepanhau uye online nhau. Ndezvipi zvakafanana izvi? Kupa, kudiwa uye musika unochinja.
Ndiri fan hombe we capitalism uye ndinoonda zvishoma kudivi re libertarian rezvematongerwo enyika. Ini ndinotenda kuti misika yemahara kazhinji inowana nguva kwayo nzira yekufambisa. Nguva dzese dzandinoona hurumende ichirwisa zvekupamba, kugovana-faira nekupinza zvisiri pamutemo ini ndinotunda. Uye pese pandinoona hurumende ichidzivirira indasitiri, ndinokunda zvishoma. Ini ndinokunda nekuti handitendi misika mitema ingadai iriko dai isiri yemasangano anodzora zvigadzirwa zvavo uye kudzivirira kwavo kukuru purofiti.
Iyo Internet yakavhura musika pane mimhanzi uye yakazara. Pandakanga ndiri mudiki, ini handina kuziva kuti kwaive nemamirioni evanyori munyika. Musika wacho waingova nenzvimbo yemazana kana zviuru. Kwandiri zvaingova KISS. Ikozvino sezvo musika wavhurika, kuda kwaramba kwakafanana asi iyo kuwanikwa kuri kwese kwese. Zviri zvechisikigo chete kuti uone kuti mutengo wemimhanzi ungangodzikira pasi apo kuwedzera kwacho kuchiwedzera.
Asi hazvina kudaro. Iyo mutengo wealbum haina kuchinja mumakore makumi maviri neshanu kunyangwe paine ruzha rwekupihwa kwemimhanzi uye nekureruka kwazviri kupihwa kuburikidza newebhu. Hapana munhu akanyunyuta apo indasitiri yemimhanzi yaitengesa maCD zvakapetwa kazana mutengo wayo. Uye, nenyeredzi dzemamuvhi, rap uye nyeredzi dzedombo dzinoratidza maBentleys avo matsva, zvakaoma kwandiri kuti ndinzwire tsitsi neindasitiri iyi. Kana vanhu vakatendeseka vachigovana mumhanzi pachinzvimbo chekuutenga, zvinoreva kuti njodzi yekubatwa inodarika mutengo wemumhanzi. Dambudziko harisi vanhu vakatendeseka, mimhanzi, kana kugovana mafaira ... ndezvekuti indasitiri yemimhanzi haisi izvo zvayaimbove.
Muimba yangu yekutandarira ndine HDTV uye yakakomberedza ruzha system yandinogona kuzunza imba nayo. Nei ndaizoenda kunobhadhara tikiti remabhaisikopo ye $ 12 uye $ 10 popcorn uye chinwiwa apo ini ndichigona kuona bhaisikopo rechikamu chemutengo munyaradzo yeimba yangu yekutandarira? Handikwanise kuenzanisa IMAX… ndiri achida kubhadhara yakawedzera zvechiitiko ichocho. Iyo indasitiri yemamuvhi haisi iyo hondo pakati pekupamba uye bhaisikopo bhaisikopo, ihondo pakati peimba yemitambo uye yemovie cinema. Uye imba yemitambo iri kukunda!
Kana iyo indasitiri yemamuvhi ichitarisira kubudirira, ivo vangadzikise mutengo wematikiti e cinema uye chikafu, vowedzera zvimwe zvekuwedzera (pamwe chisvusvuro, waini uye imwe cappuccino), voisa mune zvimwe zvigaro zvine denderedzwa nekuzorora kuti ndiite husiku kunze neshamwari. Ini handikwanise kurodha izvo ruzivo!
Ndakaverenga kuti mapepanhau achaedza kuyedza kubhadhara masvingo zvakare. Ndinofunga isu takapfuura neizvi kashoma… uye havasati vazvinzwisisa. Indaneti ndiyo nzira yepamusoro-soro… mapepanhau ndiwo makomba. Mapepanhau anoshandisa zvemukati kuzadza maburi avasingakwanise kutengesa ma ads mukati uye vazhinji vakasiya pakuchera zvakadzika kuti vawane iyo chaiyo nyaya. Ini handibhadhare pepanhau nekuti ini tsvaga zvirinani nhau online, yakanangana kubva kunobva, isina mutsindo, uye isina kushambadzira kuputira yakatenderedza.
Ah chokwadi, ndakapa kuenda Zuva Nezuva.. kuyedza kweindasitiri yemapepanhau kuunza kusavimbika kwese kwekutumira kwepepanhau kuIpad. Inononoka, inopunzika, uye haiwanzo nhau. Vanofanira kuidana Nezuro! Asi, sezvo nhau iri indasitiri izere, pane imwe nzira imwe kodzero yavanokodzera kunze kwemiganhu ye capitalism inovapa mukana wekuramba vachiedza kuita makumi mana muzana mibairo yemari? Ndine hurombo mapepanhau… Dzokera mukuzivisa kukuru uye vanhu vachabhadhara izvo zvirimo.
Mune imwe neimwe yezviitiko izvi, ini handina mhosva mutengi uye ndinonzwira tsitsi vanhu vanotyora mutemo. Mushure mezvose, izvi hazvisi zve capitalism chete? Kana mutengo ukapfuura chishuwo, chinhu choga chakasara musika mutema kuti uwane chigadzirwa kana sevhisheni kubva. Nehurombo, maindasitiri aya akakura zvakanyanya uye zvine simba zvekuti vawana vezvematongerwo enyika muhomwe yavo yekumashure kuyedza kuburitsa mitemo vhiki rega rega kuyedza kumisa kubuda kweropa. Vafudzi… iyi haisi nyaya yematsotsi, inyaya yemusika.
Tichifunga nezve rant iyi, iwe ungafunge kuti ini ndangangoita nezvehusimbe. Kwete! Kune mienzaniso isingaverengeke yezvigadzirwa nemasevhisi akagadziriswa. Uye ini ndinotenda kuti vanhu vari kubhadhara zvemukati kupfuura zvavaimboita kare. Pandaive mudiki, vabereki vangu vaive nefoni, pepanhau, dema & chena terevhizheni, uye vakabhadhara mavinyl maalbum. Semunhu mukuru, ndinobhadhara nharembozha, mameseji ezwi, nharembozha, chirongwa chedata, chirongwa chekutumira mameseji, (x zvirongwa zvevana vangu) terevhizheni, pakuda mafirimu, Broadband internet, XBox Live, iTunes uye Netflix.
Aya haangove maapuro mashoma akashata ayo akatora kune hupenyu hwese hwematsotsi. Mikana ndeyekuti, wepakati munhu waunoziva ari kubiridzira kana kugovera mimhanzi kana mabhaisikopo. Kana mhosva ikaenda zvakanyanya, dambudziko harisi mhosva… unofanirwa kutanga watanga kushamisika kuti chii chakakanganisika nemusika unoburitsa rudzi irworwo rwekupindura.
Kuvhara mukomana anogadzira network uko vanhu vanogovera nekutora haisiyo mhinduro, futi. Isu takapfuura neizvi neNapster uye iyo Pirate Bay. Na Megauploads pasi, zviuru zvishoma mamwe masayiti ari kunze uko anozogonesa chiitiko ichi. Idzo nyowani ndedzega zvakavanzika netiweki ine asingazivikanwe masuo uye akavharidzirwa kutaurirana kuti hurumende dzisakwanise kuziva. Iyo piracy uye musika wekuba pamimhanzi uye mafirimu haisi kuenda chero kupi.
Ini ndaneta neano makambani kutaura kuti iyo mari yakarasika kune indasitiri iri mune [kuisa] zvirevo. Ingori nhema dzakashinga. Vanhu vaizoba bhaisikopo havana kumboronga kushandisa mari mune yemitambo. Hauna kurasikirwa nemari nekuba kwavo, wakarasikirwa nemari nekuti waibhadharisa zvakawandisa uye imba yemitambo irikurova garo rako.
Uye usandiudze kuti vanhu havazobhadharira zvemukati uye chedu chete nzira ndeyekukiya munhu wese kumusoro. Tose tiri kubhadhara zvemukati zvemazuva ese! Mutengo unongofanirwa kuenzanisa kukosha. Ivo vanhu vari Chinyorwa chaAngie zvaratidza izvi… wongororo dzakabhadharwa dzakavimbika uye chengetedza vanyori vavo zviuru zvemadhora. Chinyorwa chaAngie chine kuchengetedza kukuru nevatengi vavo uye vanozivikanwa zvakanyanya ivo vakakwanisa kuenda kuruzhinji!
Masoko ari kuchinja uye aya mamwe maindasitiri ASI anochinja Sei ivo vari kuita iyo nyaya yematsotsi uye kwete yehupfumi? Enderera pamwe nekuedza kwemakambani makuru kupara mhosva yakawanda uye yakawanda yewebhu nekuverenga iyo Deeplinks blog paElectron Frontier Foundation.
Tags: hr 1981Kim dotcommegauploadnapsterpiracyPiratepirate bayzvakavanzikachiremwaremwakuba
Kushambadzira Mapurojekiti maringe nemaNzira
Gender-based Consumer Tsika
Ini ndinobvumirana zvachose newe: misika mitema yaisazovapo dai isiri yemasangano anotonga zvigadzirwa zvavo. Kutenda nekuverenga kukuru.
Iyi nyaya haisi kuenda chero nguva munguva pfupi iri kutevera, uye zvinosuwisa kuti iwo maindasitiri ari kutsvaga mhinduro dzakaipa ariwo mukusvibisa hurukuro yezvematongerwo enyika, zvichitungamira mukuedza senge SOPA, ACTA, nevamwe. Doc Searls nguva pfupi yadarika akatumira chimwe chinhu chakanangana nehurukuro, zvakakodzera kuverenga. http://blogs.law.harvard.edu/doc/2012/02/29/edging-toward-the-fully-licensed-world/
Ini ndaneta neaya makambani achitaura kuti mari yakarasikirwa neindasitiri iri mumi [insert] illions. Ingori nhema dzakashinga. Vanhu vaizoba bhaisikopo vakanga vasina kumboronga kushandisa mari mune yemitambo. Hauna kurasikirwa nemari nekuba kwavo, wakarasikirwa nemari nekuti wachaja yakawandisa uye imba yemitambo iri kukwenya garo rako. ”
Ini handigone kana kutsanangura kuti ndinobvumirana zvakadii neshoko iri! Ichokwadi che100%.